Habka ugu fudud oo effortless inay tijaabiso xawaaraha Internet inaad helayso ku hadalka taleefanka gacanta waa iyadoo la isticmaalayo qalab imtixaan lagu qaadi intarnatka in (dhab ahaantii waa website) ayaa dhisay-in ahaatid xawaaraha. Si kastaba ha ahaatee ka biyodiiday qaadidda habkani waa in qalabka mobile ah oo ku saabsan taas oo aad rabto in aad tijaabiso xawaaraha internet-ka ay leeyihiin waa in Adobe Flash rakibay waxa ku jira.
Kadib marka aad si guul leh ku rakiban Adobe Flash ku saabsan qalabka telefoonada gacanta, halkan waxaa ku qoran liiska dhowr goobood oo aad u isticmaali karto in aad tijaabiso si aad xawaaraha Internet mobile:
MegaPath Speed ​​Test Plus (URL: http://www.megapath.com/speedtestplus/ )
MegaPath ee Speed ​​Test Plus wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u tijaabiso xawaaraha internetka ee qalabka Internet-karti aad ku. Waxaad samayn kartaa imtixaanka xawaaraha internet-ka saxda ah ka deggan tahay (ama meesha ka meesha aad isticmaalayso Internet-ka la joogo aad - xataa halka akhriyaya), ama waxaad dooran kartaa magaalo ka duwan meeshii aad rabto in aad imtixaanka la qabanayo by goobta.
Waxa intaa dheer in lagu qiyaaso download iyo Upload xawaaraha internet-ka oo ku saabsan qalab aad, goobta sidoo kale hubinayo ah xirmooyin lumay, jitters, iyo Telcom in qalab aad la kulmi kartid halka gudbinta xogta.
Imtixaanka Speed ​​(URL: www.bandwidthplace.com )
Imtixaanka Speed ​​waa website HTML5 ku salaysan oo loo isticmaali karo si ay u tijaabiso xawaaraha internetka aad laptop, computer desktop, kiniin ah, iyo telefoonka gacanta. Goobta waa universal oo laga gali karo browser web oo aad doorato wax. Interface user-friendly waxa uu leeyahay qeybaha kala duwan si loo cabbiro iyo muujiyaan download iyo xawaaraha geliyaan oo ay la socdaan wadarta guud ee bandwidth Internet in qalab aad qaata waqtiga imtixaanka.
Qalabka dalwaddii oo la soo bandhigay bogga internetka ee sidoo kale ogaadaa iyo bandhigayaa Ciwaanka IP: ga ah qalab aad ah (in aad ka heshay bixiyahaaga adeegga Internet ama ISP).
Faaiido dheeraad ah ee la isticmaalayo Baaritaanka Speed ​​waa in si tijaabo ah oo aad xawaaraha Internet mobile, waxa kuu ogolaanayaa inaad doorato server ka dhigay meel gaar ah oo aad doorato. Sidaas ayaad noqon kartaa xaqiijiyay in cabiraadda ay yihiin kuwo sax ah sida ay degaanka aad ka deggan tahay.
OOKLA SPEEDTEST weli waa mid ka mid kale oo ka mid ah website-yada caan ah si ay u tijaabiso xawaaraha internetka ee kombuyuutarada desktop aad, kombuyuutar oo laptop ah, oo xitaa adiga ku telefoonada gacanta.
Website ayaa si toos ah ogaadaa meesha aad ku saleysan Ciwaanka IP: ga aad (waa in ay sidoo kale si toos ah u ogaado sida ugu dhaqsaha badan aad u furtid goobta), oo Doorto server ee ugu dhow xawaaraha heli karaa imtixaanka. Interface ayaa dareen leh oo soo jiidasho leh soo bandhigay goobta aad khariiradda caalamka.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u bilaabi imtixaanka xawaaraha, xawaaraha guud ahaan, iyo download iyo Upload xawaaraha waxaa lagu xisaabiyaa iyo bandhigay screen laftiisa.
SpeedOf.Me waa website imtixaanka xawaaraha internet-ka in ay ku tusaysaa natiijada imtixaanka ku taal shaxda garaaf ah iyo in aad ku sal-waqtiga dhabta ah marka loo isticmaalo on desktop ama laptop computer ah. Inkasta oo marka la isticmaalo telefoonka gacanta, telefoonka ma aha leeyihiin in ay Flash Adobe ee lagu rakibay waxa ku jira, natiijooyinka baaritaanka ku saabsan qalabka telefoonada gacanta waxaa lagu soo bandhigay in qoraalka fudud (oo aan wax garaafka).
Arrintan oo uu weheliyo download iyo Upload xawaaraha natiijada, goobta sidoo kale soo bandhigay server xawaaraha imtixaanka in si loo cabbiro xawaaraha internet-ka loo isticmaalo.
Si ka duwan versions kale mobile ka mid ah websites imtixaanka xawaaraha Internet, TestMy.net kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan download iyo geliyaan baaritaano xawaaraha si gooni gooni ah, ama baaritaan caalami ah si loo cabbiro labadaba Upload iyo xawaare download hab la isku daro.
Bogga internet ku waa labada kombiyuutarada desktop / kumbiyuutarada laptop iyo Qalabka telefoonada gacanta laga heli karo. Isla URL ah in kor siiyo waxaa loo isticmaali karaa si ay u helaan website-ka iyo tijaabin natiijada xawaaraha Internet labada dhufto ee mobile iyo kombiyuutarada.
Fiiro gaar ah: Inkasta oo rakibidda Adobe Flash waa hawl fudud, ee qaar ka mid ah telefoonada gacanta (ama xitaa ku dhufto ee qaar ka mid ah) qorshaha heshiiska uu noqon karo caqabad, oo waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah iyo sidoo incompatibilities.
Inkasta oo la isticmaalayo internetka ee ah inay tijaabiso xawaaraha internet-ka muuqataa sahlan, sida kor ku wada hadleen, arinta la soo Adobe Flash helitaanka iyo / ama waafaqsan wax walba waa. Marka la eego tani, dhibaatada la suulin karin iyadoo la isticmaalayo wax app dhinac saddexaad si ay shaqo u heli sameeyo.
Isku-dib oo kaliya in la is la hab isticmaalka app gacanta imtixaanka xawaaraha internetka waa in app loo baahan yahay in laga soo degsan oo lagu rakibay on kaydinta telefoonka ee deegaanka. Si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa la dayac ka fiirsaneysa xaqiiqada ah in barnaamijyadooda imtixaanka xawaare sida bixiyaan dhowr muuqaalada casri ah oo dheeraad ah aan caynkaas ahaynna lama heli karo marka aad isticmaasho website-ka.
Dhowr barnaamijyadooda aad u isticmaali karto in aad tijaabiso si aad xawaaraha internet-ka mobile ka mid ah:
Sensorly - Sensorly ma ahan oo kaliya xawaaraha Internet imtixaanka app gacanta laakiin sidoo kale waa awood u siinaya macluumaadka kor-u-taariikh ku saabsan maps degaanka iyo shabakadaha in meelaha ay haystaan ​​iyo nooca waxa ka mid ah Internet-ka iyo xawaaraha. Sensorly waa awood lagu ogaan karo oo ay la socoto xawaaraha isku xirnaanta Wi-Fi xiriir 3G, 4G, LTE, iyo 2G.
Tani app Android oo lacag la'aan ah in si toos ah lagala soo bixi karaa Google Play Store ah adigoo raacaya link hoos ku siiyo:
SpeedSpot - app kale Android oo aan tijaabin oo kaliya xawaaraha internet-ka mobile laakiin sidoo kale ka heli ka Wi-Fi shabakadaha laga heli karaa lacag la'aan ah oo aad u. Arrintan oo uu weheliyo helidda furan shabakadaha Wi-Fi meelaha aad u dhow, SpeedSpot sidoo kale awood u ogaanno xawaaraha ee isku xirnaanta u goobaha Wi-Fi 'waa la heli karaa.
SpeedSpot taageertaa LTE, 4G, 3G, Cable, ADSL, iyo shabakadaha DSL iyo lagala soo bixi karaa iyo lagu rakibay qalab Android ka eeg xiriirka hoose ku siiyey;
Speed ​​Test Light - Tani waa Android xawaaraha Internet imtixaanka app gacanta miisaanka in si toos ah ogaadaa nooca xiriir Internet laga heli karaa, iyo badala ay u qaabeynta sida in ay la yimaadaan wax soo saarka si mug leh iyo in ay soo bandhigaan natiijada ugu saxsan. App waa awood u hubinta xawaaraha download ah, xawaaraha Upload, iyo haddii ay jiraan, qarsoon ee la isugu gudbiyo ee xirmooyin.
Speed ​​Test Light lagala soo bixi karaa Google Play Store adigoo booqanaya xiriirka hoose ku siiyey;
OOKLA SPEEDTEST - aka Speedtest.net ee ay OOKLA waxaa laga heli karaa sida app lala soo bixi karo ee macruufka isticmaala. App (iyo sidoo kale goobta) wuxuu ka mid yahay inta badan isticmaala Internet adduunka oo dhan caan ah marka ay timaado imtixaanka xawaaraha internet-ka.
App ayaa lagala soo bixi karaa xiriirka hoose ku siiyey;
Imtixaanka Speed ​​& Wi-Fi Finder - app kale oo jirrabaya xawaaraha internetka aad iPhone ama iPad. Iyadoo 91% heerka ku qanacsanaanta user, app la horumariyo by Frederik Lipfert iyo waa ku filan oo hufan si loo cabbiro xawaaraha ee la heli karo Wi-Fi iyo calaamadaha gacanta u Internet. Imtixaanada xawaaraha ay fuliyeen Test Speed ​​& Wi-Fi Finder soo bandhigaan natiijooyinka ugu saxsan 20 ilbiriqsi gudahood.
Waxaad kala soo bixi kartaa app ka link hoos ku qoran:
Speedtest - Speedtest ee ay Xtreme shaybaadhka Inc. waa imtixaan xawaaraha internet-app a free mobile ah u isticmaala macruufka. App waa awood u tijaabiyo xawaaraha diyaar u Wi-Fi, EDGE, iyo xidhiidhada 3G.
Speedtest lagala soo bixi karaa xiriirka hoose ku siiyey;
Arimaha Saameeya Test Speed ​​Internet
Xaaladaha intooda badan, idinku Imtixaami xawaaraha internetka aad telefoonada gacanta ee si aad u hubiso in aad qaadato waxa aad bixinayso si aad ISP. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr arrimood oo saamayn ku yeelan kara imtixaanada xawaaraha internetka. Qaar ka mid ah waxay ku qoran yihiin hoos:
Downloads Beddelka - Hubi in aadan soo degsado wax oo mobile ah ma aha auto-cusboonaysiinta codsiga (s) ama software halka fulinaya imtixaanada xawaaraha internetka. Haddii ay taasi dhacdo, imtixaanada laga yaabaa in aan soo bandhigaan natiijooyinka sax ah.
Xiriiriyaan joogtada ah - Si aad u hesho natiijooyinka baaritaanka xawaaraha Internet sax ah, waa inaad hubisaa inaad tahay meel aad ka heli caymiska buuxa ee shabakadda. Goobaha meesha shabakad uu leeyahay ka yar ama caymiska ma goobaha / barnaamijyadooda soo bandhigaan natiijooyinka aan sax ahayn baaritaan xawaaraha internetka aad mobile.
Baaritaan xawaaraha Mobile Internet waxaa lagu sameeyaa si loo xaqiijiyo in aad helayso bandwidth Internetka saxda ah ee waxa aad bixisid si aad ISP. Isticmaalka app kasta ama website-ka si ay u tijaabiso xawaaraha internet-ka ku hadalka taleefanka gacanta kaa caawinaysaa in aad loo cabbiro xawaaraha internetka laga heli karo oo ay helaan wax kasta oo furan shabakadaha laga heli karaa wireless ah in aad isticmaali karto si aad weli ku xiran internetka.
> Resource > Android > Sidee aad baadho Mobile Internet Speed?